Isakhelo sokulala sikaKumkanikazi esiPhakanyisiweyo kwibhodi yentloko
Nje, into esithatha ixesha lokucinga ngayo yindlela yokufumana umatrasi olungileyo nolungileyo. Nangona kunjalo, Nabani na othenge isakhelo sebhedi uyavumelana nokubaluleka kwaso oko kuhlala kuthatha umzamo omkhulu. Ukujongana nenani elikhulu kangaka lefanitshala, Zininzi izinto ekufuneka zithathelwe ingqalelo. Ngokuqinisekileyo, Iipaneli zebhedi, iintlobo zininzi njengeebhedi ukusuka kubungakanani ukuya kwizinto eziphathekayo. Yiyo loo nto, ukuba uziva umathidala okanye kunzima kuwe ukuba uthathe isigqibo sokuba yeyiphi ekufuneka ibe lukhetho lokuqala njani, uthini malunga nokufunda le bhedi yokumkanikazi iphakanyisiwe yibhodi yentloko?
Isakhelo sebhedi ukumkanikazi iphakanyisiwe yibhodi yentloko sisiqwengana esifanelekileyo sokubekwa kulo naliphi na igumbi lokulala ngeendlela ezahlukeneyo. Ukugqitywa grey gorgeous upholstered kunye noyilo olucekeceke kuyenza ibonakale intle ngakumbi kwaye ikhusela. Iipili zecala elinyusiweyo lenza inkangeleko entle nenomtsalane ehambelana ngokugqibeleleyo nesikwere esidala. Umqolo wamathambo uxhasa ngokupheleleyo umatrasi wakho. Iibhodi ezenziwe ngomthi zinokulungisa umatrasi kwisiseko. Imilenze ebhedayo ehleliyo neklasikhi iyila uyilo lwenkangeleko ehambelana nezinto ezihamba kakuhle kunye nezitayile kunye nezinto ozikhethayo. Yonke into oyifunayo ngokukhawuleza kwaye ngokulula ukuyifaka le freyimu yebhedi ifakiwe kwigumbi. Ukuthunyelwa ngokukhawuleza nangokukhuselekileyo kwibhokisi enye, ekunene kwindawo yokugcina izinto.
Chwetheza: Ifanitshala yasekhaya, Igumbi lokulala
Izinto eziphathekayo: Ilaphu; Isinyithi;
Inkangeleko: Ifanitshala yangoku
Igama lemveliso: Isakhelo sebhedi ukumkanikazi iphakanyisiwe yibhodi yentloko
Inombolo yomzekelo: BF-AU01-04
Umsebenzi: Isiseko sokulala
Ubukhulu(i-CM): 137L * 190W
Ubungakanani bokupakisha(i-CM): 139L * 192W